Gbaa ịnyịnya Zimbabwe na-ewebata egwuregwu ịgba ịnyịnya
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Gbaa ịnyịnya Zimbabwe na-ewebata egwuregwu ịgba ịnyịnya
Na-agbasa News Travel • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ kacha ọhụrụ na Zimbabwe
nke John Ditima dere
Gbaa Zimbabwe, ewebatala ịnya anyịnya na Hwange National Park (HNP) na mpaghara Matabeleland North maka ikiri egwuregwu na ịnyịnya.
Gbaa onye nkwuchite Zimbabwe, Luke Chikoo kwuru na ịnya ịnyịnya na-enye ohere maka ịlele anụ ọhịa dị egwu site na ụzọ ndị njem nleta na-emebu ma na-enye ohere iji chọpụta ụfọdụ ebe ndị mara mma nke a na-enweghị ike ịgagharị n'ụgbọala.
“Na safari, anyị nwere ike iwe karịa mmadụ asatọ. Ugbu a, anyị nwere otu ịnyịnya 23 sitere na ịnyịnya safari nwere ahụmahụ na-eto eto na-akwado akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Chikoo na-ekwu, dika anyi na-agba oso na nnukwu egwuregwu, anyi na-anabatakwa ndi na-agba inya-agba nwere obi iru ala na uzo nile.
HNP bụ ogige ntụrụndụ kasịnụ na Zimbabwe ma nwee ụdị nnụnụ dị iche iche 400 na ụdị mammals 107. Ebe ọ bụ na Hwange dị naanị otu elekere anya site na ndịda nke ọdụ ụgbọ mmiri Victoria, na awa atọ na ọkara site na Bulawayo, ọ dị mfe ịnweta site na Victoria Falls na Joshua Mqabuko Nkomo (Bulawayo)